Yenza imfashini lesikhumba yezandla: umgexo stylish zezimvemvane
ngekhono isisebenzi onekhono uyohlale ukuthola izinto ezindala. Ngiyavuma, abaningi ukuhlangana uthuli ekhoneni kude ekamelweni isikhathi eside emfashinini lesikhumba elingenamikhono noma ibhantshi, akunjalo? Kungenzeka ukuba uqaphele imibono ezithakazelisayo usebenzisa lezi zinto kuhlukile material enhle? Ake sibone ukuthi yini zingenziwa lesikhumba yezandla ngezandla zabo. Ake sihlole inqubo womshini izingcezu ezincane, kodwa stylish - imigexo zezimvemvane.
Yini zingenziwa lesikhumba yezandla?
Eyokuqala, yebo, zonke izinhlobo ikhabethe izinto nezinsiza: amabhande, othayi, izikhwama. Kodwa, ngeshwa, akuzona zonke amakhosi kukhona esandleni amathuluzi akhethekile sokusingatha izingqimba lelineni indawo. Ngaphezu kwalokho, ngempela eziyingozi futhi okuyingozi, isibonelo, sebethungela wokubhala isikhwama ajwayelekile kakhulu isikhumba olunzima. Ake sizame ukwenza okuthile elula futhi okungabizi. Njengoba imihlobiso athandwa kakhulu yezandla encane eyenziwe lesikhumba. Master class okwethulwa kulesi sihloko kuzokusiza ukuba wenze elula kodwa ngesikhathi esifanayo-accessory zikanokusho yasekuqaleni - umgexo izimvemvane. Isiqondiso kunikezwa ngesimo isinyathelo ngesinyathelo imiyalelo nekuphawula.
Isinyathelo Sokuqala: yezandla ithempulethi
Kuboniswa esithombeni umgexo, kuhlangene ingubo nge umklamo efanayo, kubukeka stylish kakhulu. Ukuze ugweme amaphutha olinganise nosayizi, uyithathele yokukhiqiza isifanekiso isampula nezicubu.
Sika ucezu uthayi impahla.
Namathisela obuphelele sendwangu ephepheni bese udweba ipensela. Sika eduze nentaba.
Hlola wesimethri - isifanekiso uwasonge eduze butterfly isikhungo umugqa. Susa sikelo projection etshiyeneyo.
Uma wayefisa, ungenza workpieces obujwayelekile ezahlukene ambalwa. Ngenxa yalesi isikali iphethini usayizi oyifunayo.
Isinyathelo Sesibili: Master zezimvemvane Umgexo
Njengoba sebezinikele kule iphethini, uqhubekele sikhuthazele isifanekiso isikhumba.
Khetha eliphezulu izingxenye zendaba womshini yezandla - bushelelezi, omunye umbala, ngaphandle scuffs nomunye umonakalo. Ukugqoka lesikhumba izimpahla Hlukanisa zibe izicucu eduze ezivuzayo abukhali zokubhala ummese, bese ngemuva yensimbi kancane ngokusebenzisa ngendwangu eyomile.
Material enawulungiselelwa flip underside phezulu.
Ngelulela izingcezu lesikhumba izikhala bese uzungelezela iphethini eduze emaphethelweni isibambo. Izibonelelo akudingeki yaseZimbabwe.
Lapho ukusika workpieces yesikhumba yezandla kungaba nzima ukwenza bushelelezi futhi ubeke izinto ngononina. Sebenzisa sikelo impahla nomzimba omncane, futhi indawo - ngommese obukhali ne ithiphu iloliwe, futhi sokumelela lokhuni olukulesi itafula.
Cover izimvemvane ezinemibala nail sula.
Namathisela nalutho itheyiphu obuphelele edingekayo. Ukuzifihla emikhawulweni iribhoni. Ungasebenzisa stapler ukubophela noma ngezinye iziqobosho ekhethekile, okuyizinto Hardware ezitolo.
Kokuvamile incazelo yoqobo imigexo okufushane yanjalo yokuxhuma izimvemvane ezinkulu nezincane. Yezandla engase aklonyeliswe ubuhlalu, ubuhlalu, kwamagoda isitayela Macramé, efekethisiwe, izakhi ukunitha, nokunye. D.
ongakhetha yokukhiqiza accessory ye eziningana
butterfly Original kwesikhumba ingasetshenziswa hhayi kuphela njengoba ilungu umgexo eside entanyeni. Sebenzisa kuphela izingxenye ezimbalwa, ethe njo tape, futhi uthola usebe ekhanda kanye isongo engalweni. Ngokufanayo, ungakwazi ukwakha okukhethekile hair isiqeshana noma ibhroshi. Vele wenze iphethini inkudlwana ngobukhulu futhi ezimbili ungqimba (ukuminyana). Namathisela ozithandayo ukuyona.
Ngakho, lesikhumba yezandla kungaba ezihlukahlukene kakhulu. Yiziphi yakho - kuncike umcabango kanye nekhono of the needlewoman. Yiba zokudala, abantu amangazayo imibono emisha!
Indlela yokwenza iqhude iphepha ngezandla zakho: isinyathelo ngesinyathelo imiyalelo kanye nezincomo
Ukwelashwa nokuvikelwa amakhambi abantu adrenal: Eliqinisekisiwe Izindlela
Fence kuya esegcekeni. ezicijile okuhlobisa. ezicijile plastic